माधव नेपाल र प्रचण्डलाई मनकाे बाघले खान थाल्याे
January 8, 2022 N88LeaveaComment on माधव नेपाल र प्रचण्डलाई मनकाे बाघले खान थाल्याे
काठमाडौं । जनादेश लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर जब–जब चुनावको घण्टी बज्छ, तब–तब आफूलाई जनताको मसिहा बताउने दलका शीर्ष नेताहरूमा एकप्रकारको भयले बास गर्छ । जनमतले सत्ताको रजगज टुट्ने दवाव उनीहरूमा परेको देखिन्छ । राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेको भाग खोस्नुअघि बढेको गठबन्धनकारी शक्ति होस् या गठबन्धन फुटाउने दाउपेचमा रहेको एमाले सबैभित्र आत्मविश्वास नरहेको प्रष्ट हुन्छ […]
विद्या भण्डारी र केपी ओलीले संविधानलाई नै खत्तम पार्न खोजे : पूर्वराष्ट्रपति यादव
January 8, 2022 N88LeaveaComment on विद्या भण्डारी र केपी ओलीले संविधानलाई नै खत्तम पार्न खोजे : पूर्वराष्ट्रपति यादव
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई नै खत्तम पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेर एक वर्षमा दुई–दुई पटक संविधानमाथि आक्रमण गरेको जिकिर गर्नुभयो । चन्द्रदेव जोशीद्वारा लिखित पुस्तक ‘माक्र्सवाद र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन’को शनिबार काठमाडौंमा विमोचन […]
January 8, 2022 N88LeaveaComment on ‘गोप्य सहमतिको एकप्रति मसँग छ, अर्को प्रचण्डसँग’ : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग गोप्य सम्झौता गरेको र त्यसको ‘एक कपी’ आफूसँग सुरक्षित रहेको खुलासा गरेका छन्। तत्कालीन पार्टीमा विवाद बढ्दै गएको बेला माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई झुक्याएर प्रचण्डले आफूसँग सम्झौता गरेको ओलीले खुलाएका हुन्। ‘पार्टी विवादबारेको मुद्दा अदालतबाट के हुन्छ, के हुन्छ […]
प्रचण्डले फैलाए काेराेना, भेट्ने जति सबै थला परे !
January 8, 2022 N88LeaveaComment on प्रचण्डले फैलाए काेराेना, भेट्ने जति सबै थला परे !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिन जाने युवादेखि विद्यार्थी नेताहरूमा कोरोना संक्रमण भएको छ। आठौं महाधिवेशनबाट फर्किएका प्रायः सबै नेता कार्यकर्तामा कोरानाको लक्षण देखिएको हो। प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। यसका साथै, प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल, प्रचण्डलाई बधाई दिन गएका वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा, वाइसिएल अध्यक्ष […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २५ गते आइतबारकाे राशिफल !
January 8, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २५ गते आइतबारकाे राशिफल !
वि.सं. २०७८ साल पुस २५ गते आइतबार नक्षत्र : उत्तरभाद्रपदा , ११:५७ बजे उप्रान्त रेवती, तिथि : सप्तमी , १५:४२ बजे उप्रान्त अष्टमी, करण : वणिज १५:४२ बजेदेखि भद्रा , २७:५४ बजे उप्रान्त कौलव योग : परिघ , १५:३८ बजे उप्रान्त शिव मेष राशि : व्यापार–व्यवसायमा नयाँ प्रयोग गर्न सकिनेछ । सुख र सन्तुष्टि मिल्नेछ। […]
देउवाका कारण चिरा पर्‍यो कांग्रेस, अब फक्लेटा छुट्टिन मात्र बाँकी
January 8, 2022 N88LeaveaComment on देउवाका कारण चिरा पर्‍यो कांग्रेस, अब फक्लेटा छुट्टिन मात्र बाँकी
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापतिले आफूखुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने बताएका छन् । सुनसरीको इनरुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सभापतिले म सबैको हुँ भने पनि विश्वासको वातावरण भने बनी नसकेको बताए । सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमा भएको व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर हिँड्ने हो भने पार्टीले […]
राउटे बस्तीमा गएर मन्त्री झाँक्रीले के गरिन् कसैले नसाेचेकाे यस्ताे, राउटे सम्झना र गाजलु अब के गर्लान् !
January 8, 2022 January 8, 2022 N88LeaveaComment on राउटे बस्तीमा गएर मन्त्री झाँक्रीले के गरिन् कसैले नसाेचेकाे यस्ताे, राउटे सम्झना र गाजलु अब के गर्लान् !
सल्यान । शुक्रबारको मध्यान्ह राउटे बस्तीमा नौलो चहलपहल थियो । सल्यानको सिम्ता गाउपालिका ४ भेरी नदी तिरमा रहेको चौरमा स्याउलाले बनाएको छाप्रो नजिकै राउटेहरुबाट घेरिएकी थिइन् शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री । त्यही हुलमा मिसिएकी राउटे युवती सम्झनाले लजाउँदै भनिन् ‘मीत लगाया क्या हुने हो ? त्यसपछि मन्त्री झाक्री बोलिन,‘मीत लाए माया बडछ नि ।’ […]
बतास छेक्क खाेज्दा झन् हुण्डरी मच्चिदै, ओलीदेखि देउवासम्मका ठूला नेता सँगको गोप्य सेटिङको खुलासा !
January 8, 2022 N88LeaveaComment on बतास छेक्क खाेज्दा झन् हुण्डरी मच्चिदै, ओलीदेखि देउवासम्मका ठूला नेता सँगको गोप्य सेटिङको खुलासा !
काठमाडौं । देशभरिका ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्पत्ति हडप्न खोजेको आरोप लागेका बतास समूहका प्रमुख आनन्द बतासले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई ज्वाईं भन्ने गरेको खुलासा गरेका छन् । एक निजी टेलिभिजनले गरेको स्टिङ अपरेशनका क्रममा उनले आफ्नो ससुराली झापाको भद्रपुर भएकाले केपी ओलीले आफूलाई ज्वाईं भन्ने गरेको बताएका हुन् । ‘मेरो ससुराली भद्रपुर, ओलीजीले मलाई […]
यी हुन् कोरोना संक्रमण पुष्टी भएका प्रचण्डसहित माओवादीका ११ नेता ! कसकाे अवस्था के छ ?
January 8, 2022 N88LeaveaComment on यी हुन् कोरोना संक्रमण पुष्टी भएका प्रचण्डसहित माओवादीका ११ नेता ! कसकाे अवस्था के छ ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित पार्टीका ११ जना नेता कार्यकर्तालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । नेता कार्यकर्ता धमाधम अस्वस्थ्य भएपछि केन्द्रीय कार्यालय सिल गरिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । प्रचण्डलाई कोरोना पुष्टि भएको उनको सचवालले जानकारी दिएको हो । प्रचण्ड आठौँ महाधिवेशनमा पुनः […]
ओली निवासमा देउवा जानुको भित्री अर्थ, यस्ताे छ चुराे कुराे !
January 8, 2022 N88LeaveaComment on ओली निवासमा देउवा जानुको भित्री अर्थ, यस्ताे छ चुराे कुराे !